COCO Game Center ဆိုပြီး ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ CHANEL | CosmeticMyanmar
Home » Article » COCO Game Center ဆိုပြီး ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ CHANEL
COCO Game Center ဆိုပြီး ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ CHANEL
CHANEL ဆိုတာကိုတော့ မိန်းကလေးတွေ သိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ Fashion အလန်းစားတွေအပြင် Cosmetic တွေကိုပါ ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိတဲ့ brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ CHANEL ရဲ့ Cosmetic တွေကတော့ မိန်းကလေးအများစုကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး ပစ္စည်းတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အခုဆိုရင်တော့ CHANEL က သူ့ရဲ့အလှကုန်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ COCO Game Center ဆိုပြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ Game Center ကိုတော့ Tokyo နဲ့ Seoul မှာ ပြုလုပ်လိုက်ပြီးနောက် အခုဆိုရင် Singapore ကို ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ COCO Game Center မှာပါဝင်တာတွေကတော့ အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဂိမ်းစက်ကြီးတွေ၊ Game Center တွေမှာ မြင်တွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ အရုပ်ကောက်တဲ့ စက်ကြီးတွေလို အထဲမှာ CHANEL Cosmetic တွေထည့်ထားတာကို ကောက်ရတဲ့ စက်ကြီးတွေအပြင် တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နေရာတွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ဒီ Game Center ကို စိတ်ဝင်စားလို့ သွားချင်တဲ့သူတွေကတော့ pre-register လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ COCO Game Center ကိုတော့ Singapore မှာ ၂၀၁၈ ဧပြီနောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
Wanna race for some coco lip blush? 😘💄💋Chanel GTA would beadream tho 🤔 #COCOGAMECENTER #코코게임센터 #ireneisChanel
A post shared by Irene Kim 아이린 (@ireneisgood) on Apr 1, 2018 at 7:51pm PDT
나만 못뽑은거 실화…😤🤯 괜찮아 매장가서 사면 주는거야🤢 #cocogamecenter #코코게임센터 #홍대 #프라이빗오픈파티 #데일리 #샤넬 #코스메틱 #뷰티스타그램
A post shared by jihee❣ (@jiyababe_) on Mar 29, 2018 at 6:56am PDT
The only games we play @chanelofficial . . . . #CocoGameCenter #Chanel #BlackBoxConcierge
A post shared by Black Box Concierge (@blackboxconcierge) on Apr 2, 2018 at 3:48am PDT
A post shared by Jena Wang (@jenawang0723) on Mar 15, 2018 at 3:57pm PDT
If you are traveling to Japan, let’s discover the brand new pop up store Coco Game Center by @chanel.beauty @chanelofficial ! #theindexe #theplace #onair #crushes #bodyandhealth #chanel #chanelbeauty #popupstore #cocogamecenter #makeup #game #geek http://the-indexe.com/2018/03/de-quoi-devenir-geek-au-make-up-coco-game-center-chanel-japan/
A post shared by THE INDEXE (@theindexe) on Mar 20, 2018 at 12:15am PDT